ဒီဇင်ဘာလ 2017 | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
လများ: ဒီဇင်ဘာလ 2017
Izmir ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီရင်ခံစာ 2017: 2.5 ဘီလီယံကိုလွန်!
Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ဘီလီယံခန့် 2017 2,5 ကျော်ပေါင်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ အဆိုပါ 14 15 ခုနှစ်တွင်စုစုပေါင်းနှစ်စဉ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘီလျံခန့်ပေါင်ချဉ်းကပ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Izmir အတွက်ဒေသခံအစိုးရများဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ 3,5၏စုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုယခင်နှစ်က [ပို ... ]
Kayseri တဲ့ Metropolitan Protocol ကိုကြား OSB နှင့်အတူလက်မှတ်ထိုး
Kayseri နှင့် Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တောင်းဆိုချက်များကိုနှင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းစက်မှုဇုန်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အမှာစကားတဲ့ protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ထိုအ Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တောင်းဆိုချက်များကိုနှင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းစက်မှုဇုန်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အမှာစကားတဲ့ protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန်သံမဏိ, [ပို ... ]
Nevsehir မြန်နှုန်းရထားလမ်း line ကနေ 12လွန်သွားပါလိမ့်မယ်မဟုတ်
ဒါဟာ Nevsehir နှစ်ခုလမ်းကြောင်းကနေအစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယခုငါမဟုတ်တဦးတည်းပေမယ့် Nevsehir ကနေနှစ်ခုမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုမည်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံမြန်နှုန်းမြင့်အလုပ်လုပ်စဉ်းစားစွမ်းဆောင်ရည်အစီအစဉ်တွင် Nevsehir (TCDD) လေ့ 2017 [ပို ... ]
Kayseri သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc က İzbanတစ်ခုမှာတစ်နှစ်တာပိုန်ဆောင်မှုများ Give ပါလိမ့်မယ်
Kayseri သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc က ဒါဟာအမျိုးသားရေးစကေးအပေါ်ပရောဂျက်နေဆဲဖြစ်သည်။ အိမျတျော၌ Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc က TCDD3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုကြောင့် Izmir ခရီးသွားလက်မှတ်စနစ် Catenary ကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ရေးယူဆထားပါတယ်မတိုင်မီနှစ်နှစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောတင်ဒါအနိုင်ရ [ပို ... ]
၎င်းတို့၏နေအိမ်များရောက်ရှိဖို့အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မြို့၏မြေမှတ်တိုင်ကိုမှ IETT နောက်ထပ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုလုံခြုံစွာ 31 ဒီဇင်ဘာလနှစ်သစ်ကူးဧဝကိုထားတော်မူ၏။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် IETT ခရစ္စမတ်အစ္စတန်ဘူလ် Metrobus ၏ဗဟိုအချက်အပါအဝင်၎င်းတို့၏နေအိမ်များမှလုံခြုံစိတ်ချစွာငြိမ်းချမ်းစွာနှင့်ရောက်ရှိရန်နောက်ထပ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်၌ထားလေ၏။ [ပို ... ]
အဆိုပါစီမံကိန်းအားယာယီ 13 နှစ်ကြာပြီးနောက်နောက်တဖန် Taksim မှယူဆောင်ခဲ့သည်, လွမ်းဆွတ်ဓါတ်ရထားရပ်တန့်နေသောကြောင့် Istiklal လမ်းလေ့လာရေးခရီးသွားဇန်နဝါရီလ 1 အတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကြောင့် Istiklal Caddesi အပေါ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်လယ်ပိုင်းဇန်နဝါရီလအတွင်းရပ်စဲ Taksim ရင်ပြင်မှာ Taksim Tünelရင်ပြင်မှာ [ပို ... ]
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager က Kurt ရဲ့နှစ်သစ်ကူးကို Message
လတ်ဆတ်သောမျှော်လင့်ချက်များ, ငါတို့စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ထားနှင့်အတူအခြားနှစ်သစ်သို့ဝနေကြပါတယ်။ 2017 နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တစ်ဦးတည်ငြိမ်ထုံးစံ၌ဆက်လက်စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၏ကြားမှကျန်ရစ်နှင့်အခက်အခဲများအမျိုးမျိုးတို့ကိုကာကွယ်တားဆီး။ အဆိုပါရထားလမ်းကဏ္ဍရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီဧရိယာထဲမှာ [ပို ... ]
အဘယ်အရာ Istiklal Caddesi စည်းမျဉ်းလေ့လာရေးဖန်ဆင်းတော်မူပြီ
အဆိုပါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြန်ခေါင်းလောင်း play ဖို့ 11 ခုနှစ်တွင် .. စတင်ခဲ့ကြောင်းချိုးနှင့် 1883 နှစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းပြီးနောက်, ချိုး 1961 တစ်နှစ်ပြီးနောက်, 29 ဒီဇင်ဘာလ 29 အပေါ် 1990 လအတွင်းလွမ်းဆွတ်ဓါတ်ရထား name ကို Taksim-ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများက relaunched ယူ Taksim-Tunel ဓါတ်ရထား, [ပို ... ]
နောက်တဖန်အတူယူဆောင်နိုဝင်ဘာလ 8 အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ယဉ်ဖို့ဂတိတော်ကိုစောင့်ရှောက်အစ္စတန်ဘူလ်၏သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်ရာနိုငျငံတျောသမ်မလွမ်းဆွတ်လမ်းရထား။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြို့တော်ဝန်Mevlüt Uysal Istiklal Caddesi အပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအပြီးသတ်အားဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်လွမ်းဆွတ်အလုပ်တခုကိုမှဂတိတော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖွံ့ဖြိုး၏Xnumx.gün [ပို ... ]
နှစ်ဦးရပ်ကွက်အနားသတ်ရန်လုပ်ငန်းခွင်အကြား Manisa အဝေးသင်
မင်းသားစီစဉ်ထားရထားလမ်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအလုပ်အကြားမြူနီစီပယ်၏အစပျိုးခြင်းနှင့် Akpinar ရပ်ကွက်အတွင်းနှင့်အတူ Kazim Karabekir ရပ်ကွက်များအတွက်မှူးမတ်မြူနီစီပယ်နှင့်ညွှန်ကြားမှု protocol ကိုအကြား TCDD İzmirဒေသဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏ Izmir ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု [ပို ... ]
antebellum မြန်နှုန်းရထားဝန်ကြီးချုပ် Yildirim ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရား
ဝန်ကြီးချုပ် Binali Yildirim, အစ္စတန်ဘူလ်-shot ပထမဦးဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းအား 1 15 မိနစ်နာရီ Edirne ကနေ download ပြုလုပ်တူးဖော်ခြင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ Edirne ဝန်ကြီးချုပ် Yildirim သောဧဝံဂေလိတရားပါတီညီလာခံ၏အစီအစဉ်များအပေါ်ကိစ္စရပ်များကိုအကဲဖြတ်ပရောဂျက်ကိုပေး၏။ Fast Edirne [ပို ... ]
ချစ်ခင်ရပါသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, 2017 နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့နိုင်ငံမှာယခုစစ်မှန်တဲ့ခဲ့တဲ့အကြီးအယခုနှစ်ဤမျှလောက်များစွာသောအကြီးအစီမံကိန်းများနှင့်အိပ်မက်များ၏ဘဝတွေကိုသောအနာဂတ်သို့သယ်မည်, ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအပေါ်အလင်းကိုသွန်းရန်။ တူးမြောင်းလေ့လာရေး, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီမံကိန်း၏တဦးတည်း [ပို ... ]
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဒီဇင်ဘာလ 31 1892 Anatolian မီးရထား ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းဒီဇင်ဘာလ 31 1892 Anatolian မီးရထားကုမ္ပဏီ၏ပထမဦးဆုံးမီးရထားအတွက်ပန်းပွင့်နှင့်အလံနှင့်အတူတူရကီသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ 31 1928 1375 Deutsche Bank တို့သည်ပညတ်တရား၏လက်၌ရက်စွဲပါပေမယ့်လက်ကို တင်. ဘဂ္ဂဒက်မီးရထား fikler အားဖြင့်ဗာဆိုင်း၏စာချုပ်နှင့်အတူဖြောင့်မတ် [ပို ... ]
အပိုဆောင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ် Diyarbakir နှစ်သစ်ကူးဧဝကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လုပ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်
ပိုမိုအဆင်ပြေများနှင့်အဆင်ပြေအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု Diyarbakir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အလုပ်လုပ်ဆက်သွားဖို့နှစ်သစ်ကူးအတွက်နိုင်ငံသားများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အပိုဆောင်းအချိန်နှင့်အတူအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများပေးလိမ့်မည်။ Diyarbakırတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, နိုင်ငံသားများပိုမိုအဆင်ပြေအဆင်ပြေပြေနဲ့စျေးသိပ်မကြီးတဲ့လွန်းပျံယာဉ် [ပို ... ]
EBSO, ပြည်တွင်းမော်တော်ကားများအတွက်အနီးကပ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု Continues
Izmir စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ (İEKKK) အစည်းအဝေးမန်နေဂျာ ESBAS CEO ဖြစ်သူ Faruk Güler, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအစ္စတန်ဘူလ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း Selami Özpoyrazဟောင်းတဦးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတာဝန်လွှဲအပ်ခဲ့သည်။ Izmir စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ (İEKKK) xnumx.'inc အစည်းအဝေးသည်သမိုင်းဝင်ဓါတ်ငွေ့စက်ရုံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွင် [ပို ... ]
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Demirtas, TCDD ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Oguz လေးစားတဲ့ရှင်းလင်း
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမာမွတ် Demirtas, TCDD ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Oguz လေးစားမှုနှင့် TCDD ကဆောင်ရွက်အလုပ်အကြောင်းကိုရှင်းလင်းသက်ဆိုင်ရာနဲ့အခြားအရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Adana-Mersin နှင့် Adana-Toprakkale related လေ့လာမှုများအတွက်မြန်နှုန်းရထားလမ်းစီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. [ပို ... ]
တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ် Thrace မြန်နှုန်းရထားများအတွက်စတင်
အဆိုပါအမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းကနေရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Tekirdag ဥရောပ, Çerkezköyတွင်း, သတိပြုÇorludanနှောင်းပိုင်းတွင်, "ငါတို့ဇန်နဝါရီလ လာ. ဤနှစ်တွင်ငါတို့သည်တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်သူ့ကိုဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောအပ်ပေးတော်မူ၏။ " အဲဒီသူကပြောသည်။ Arslan, Tekirdağ-Muratlı Ring ကိုလမ်းနှင့်အဖုံး-နန်းတော် [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, Ahlatlibel အတွက် Turk Telekom တူရကီ Facility မှာဒီဇင်ဘာလ 29 2017 သောကြာနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် 2017 သည်၎င်း၏ပစ်မှတ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်, 2018 တွေ့ဆုံအတွက်န်ကြီးဌာနများ၏လှုပ်ရှားမှုများအကဲဖြတ်။ ဝန်ကြီး "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု BUDGET ရထားလမ်းအမြင့်ဆုံးတိုးအတွက် BE" [ပို ... ]
Kardemir နှစ်ခုအသစ်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုနူးညံ့သောဖြည့်စွက်ရန်ကန်ထရိုက်တာကိုရွေးပါ။ ဒါရိုက်တာ Kardemir ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ "26.12.2017 ရက်နေ့အစည်းအဝေးတွင်ယူဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီပေါက်ကွဲမှုအရည်ကျိုမီးဖိုဖုန်ဧရိယာရုံးစနစ်များနှင့်ကျောက်မီးသွေးနယ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအာဏာပိုင်ခွင့်အာဏာ [ပို ... ]
channel အကြီးဆုံးပိုလျှံအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့သမိုင်းအောက်မှာတို့သည် လာ. ,
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) CHP ကောင်စီဝင်ရှားပါး Ataman Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့သမိုင်းဝင်သမ္မတနိုင်ငံစီမံကိန်းသည်ဆိုပါတယ်စီမံကိန်းကိုအောက်ရှိအကြီးဆုံးနှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးစီမံကိန်းကိုနှင့် "အစ္စတန်ဘူလ် 250 ဘီလီယံရေလက်ကြားကိုကာကွယ်ရန်ပြုခံရဖို့ကြေညာခဲ့သည်တစ်ဦးရေလမ်းမဟုတ်ပါဘူး [ပို ... ]